आक्र''मण सैलीमा देशभर एकै पटक राजाबादीको आ'न्दोलन ! काठमाडौँमा उर्लियो जनसागर, मुर्दाबादको लाग्यो नारा - Public 24Khabar
Home News आक्र”मण सैलीमा देशभर एकै पटक राजाबादीको आ’न्दोलन ! काठमाडौँमा उर्लियो जनसागर, मुर्दाबादको...
पहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता बहस, विवाद हुँदा धेरैजसो सैद्धान्तिक कुरा हुन्थे, अहिले दुई अध्यक्षका प्रस्तावमा व्यक्तिगत गालीगलौज छ । यसलाई कसरी बहस भन्न सकिन्छ र ?
खासगरी सुरुमा पार्टी जीवनलाई एकदम सरल, सहज ढंगले नियमित प्रक्रियामा लानुपर्थ्यो । त्यसका लागि हामीले सचिवालय व्यवस्था गरेका छौं । जसले संक्रमणकालमा पार्टीको नेतृत्व गर्छ भनेर विश्वास गर्छौं । जसको हरेक दिन बैठक बस्छ र इस्यु हेरिकन साता, पन्ध्र दिनमा हुन सक्छ भन्ने हो । विधान मस्यौदा गर्ने सदस्य म पनि थिएँ । त्यतिखेर हामीले स्थायी कमिटीलाई नै सर्वोच्च निकाय बनाएका थियौं । तर यो संक्रमणकालमा फरक पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म पुर्‍याउन सानो टिमले काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था गरेका हौं । नियमित बैठक, ब्रिफिङ र सल्लाह गरेर गएको भए सहज हुन्थ्यो । सुरुमा दुई नेताले सबै काम गर्नुभयो । दुई जना नै नौ जनाजस्तो हुनुभयो ।
केपी कमरेडको दृढता एकलकाँटे, हठी र टिम निर्माण गुटजस्तो देखिँदो रहेछ, प्रचण्ड कमरेडको गतिशीलता अस्थिरताजस्तो देखिँदो रहेछ ।
त्यत्रो युद्ध, गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि लडेकै हो, त्यसै कसैले टिपेर ल्याएको होइन । साथीभाइले नामै लिएर अपमान गर्ने ढंगले बोलेको सुन्दा लाग्छ, साथीहरू के सँगै बस्न नचाहेको हो ? अब सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हो ? तर इतिहासको आवश्यकताले पार्टी एकता भएको हो । दुवै पार्टीले बहुमत शासन, अल्पमतको प्रतिपक्ष, सामाजिक न्यायिकसम्मका कुरा स्वीकार गरिसकेपछि, नेपालमा सामन्तवादविरुद्धको जनवादी क्रान्ति पूरा भयो र अब विकास समृद्धि सुशासनको युगमा प्रवेश गरिसक्यौं भनेर एउटै राजनीतिक वैचारिक ग्राउन्डमा पुगेपछि हामी एक ठाउँमा आएका हौं । तर प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारहरूले आधा सिट मात्रै आउँछ, अब हारिन्छ, प्रचण्ड आफैं पनि हार्ने भइसकेपछि यहाँ एकता गरेको हो, प्रधानमन्त्रीको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सक्सेस हुँदैन, एमालेलाई गुटमुटाउँछु भनेर आएको भनेर एकदम गम्भीर प्रकारको आक्षेप आउँदा के त्यस्तो पनि तर्क गर्न सकिन्छ भन्ने त लागेको छ । तत्कालीन माओवादीको स्थानीय तहमा १६ लाख भोट थियो ।
Previous articleसौरभ तामाङ र सुरज क्षेत्रीले गरे सम”लिंगी वि’हे (भिडियोसहित)
Next articleकल्पना दाहालले भनिन्- अब म पनि बि’हे गर्छु । रमेश प्रसाईको हुनेवाला श्रीम’तीसँग फोनमा यस्तो कुरा भयो